Mpaghara - "Usoro nduku" magazine
Ugbo nduku nke Republic of Tatarstan
Nhọrọ nduku. Republic nke Tatarstan
Isi Isi na-aga Mpaghara
Nduku na-eto eto: Republic of Tatarstan
Mpaghara: 67 sq. km Ọnụ ọgụgụ: 847 ndị ​​mmadụ, nke 3% bụ ndị bi na obodo Geographical ọnọdụ: Republic dị na...
Na Urals, ha na-achọ ụzọ ịzụlite nhọrọ
A na-ebipụta ihe ndị na-adọrọ mmasị na ọnọdụ na-enye nduku na akwukwo nri na Urals site na FederalPress portal. Ka anyị gakwuru ha ka anyị mata...
Ke Chelyabinsk mpaghara ewepụtara atọ ọhụrụ iche nduku
Mpaghara Chelyabinsk nwere ike inye onwe ya nduku n'ụzọ zuru ezu. Na mpaghara ahụ, ọ na-eto ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ pasenti iri anọ karịa ka a na-eri. Agbanyeghị, tupu ...
A ga-enye ndị ọrụ ugbo nọ na Primorye poteto mkpụrụ osisi sitere na Belarus
A ga-eji poteto kụọ ihe karịrị puku hectare 16 na Primorye n'afọ a. Ọzọkwa, ndị ọrụ ugbo na-arụsi ọrụ ike na-emepụta akwụkwọ nri nke "borsch set". Banyere nri...
Nhọrọ na mmepụta mkpụrụ nke nduku. Ahụmahụ nke Chuvash Research Institute of Agriculture
Svetlana Konstantinova, onye isi nke nduku ozuzu na mmepụta mkpụrụ, Chuvash Research Institute of Agriculture - alaka nke Federal State Budgetary Scientific Institution nke Federal Research Center nke North-East Scientists nke Chuvash Research Institute of Agriculture na-eme nnyocha sayensị . ..
Nduku na-eto eto: Chuvash Republic
Mpaghara: 18 sq. km Ndị bi: 343 ndị mmadụ, nke 1% bụ ndị bi n'obodo ahụ. Ọnọdụ ala: Republic dị na ọwụwa anyanwụ nke East European ...
Stavropol na-ejide "Baisad" bụ naanị nnukwu ụlọ ọrụ dị na North Caucasus Federal District na-arụ ọrụ nhazi nduku. Kemgbe 2014, ahịrị na-arụ ọrụ ebe a maka ...
Ụdị nduku. Nhọrọ nke ugwu CUCASUS.
Soltan Basiev, Gorsky State Agrarian University Ka ụdị nduku dị iche iche na-achọ n'etiti ndị ọrụ ugbo nke North Caucasus Federal District, ọ ghaghị ...
Ugbo nduku nke ugwu CAUCASUS
Mpaghara Federal North Caucasian dị anya site na ebe mbụ na ọkwa n'ihe gbasara oke owuwe ihe ubi nduku na Russia. Ma n'otu oge ahụ ...
Peeji 1 n’ime 5 1 2 ... 5 Ọzọ